Volana maha-may | mandimby maharo
Posted on 7 May 2012 by Mandimby Maharo
Raha nisarika ny mpamaky azy tamin’ny lohateny « herinandron’ny loza rehetra » ny gazety ny herinandro faran’ny volana aprily, dia toa nahatsinjo zavatra. Nisy tokoa ny fihetsahan’ireo mpanohitra ao anaty fitondrana nudina an’dalambe ny faran’ny herinandro. Eto kosa dia toa maha-te hilaza hoe sao dia tsy iny herinandro iny ihany no itrangan-doza fa ny nanaraka azy koa, eny na ny volana May mihintsy ary. Tsy ireo mpanohitra ireo tokoa manko no mety hampidi-doza (Marefo sy tsy ampy herintsaina, ary mifanipaka an-karona ireo hanao izany!) fa ireto vondron’olona sy sendika maro mihetsiketika.
Ny 01 May dia andro ho an’ny asa: fotoana iray entina handinihana momba ny asa. Andro iray natokana ho an’ireo sendika sy vondrona mpiasa mba anehoany ny heriny. Indrisy nefa toa nandalovana ihany izany ho an’ny mpiasa Malagasy. Tsy nisy hetsika mba nanaitra ny tomponan’draikipanjakana. Na dia eo aza ny fitakiana maro samy hafa (mpampianatra, mpitsara, mpitatitra… nampian’ireo mpianatra) dia nisitrika sy nihidy tany an-trano ireo sendika ireo.
Natao koa ny fitsarana ilay raharahan’ireo mpikomy tao amin’ny FIGN. Nofongarina mba entina hampitahorana ireo mpanao politika voarohirohy tamin’iny fotoana iny tsy hahery fihetsika amin’ny anjara tandrifim-panoherana ataony. notsaraina io andro io koa ireo tratra ny sabotsy 28 aprily nandritry ny hetsika nataon’ireo mpanohitra ireo. Ary dia nandaitra izany satria dia nangina sy tsy nandrenesam-peo intsony ilay fikasana hakeo amin’ny Kianjan’ny demokrasia. Ny rahom-bava sy ny fandragarangana fa hiala, nefa mbola manao “service minimum” no natao teny ambony vavahady.
Teo koa ny fitazonana ireo mpanao gazety ao amin’ny onja-peo tsy miankina, toa heno manakina ny tombotsoa iaraha mikepoka ao amin’io fitondrana io. Fitoriana avy amin’olo-tsotra moa no nentina nitazonana 24 ora azy mianadahy ireo ny 02 May teo. Nitabataba sy nipoaka ny hatezeran’ireo mpihaino ity onja-peo ity ka nikasa hanao hetsika fanairana. Baomba vita amin’ny vatoaratra nefa aloha no nipoaka tetsy amin’ny ivontoerana kolotoraly frantsay. Ny 03 May, andro entina mandinika ny fahalalahan’ny fanaovan-gazety; fifanandrianjavatra sa niniana natao fa dia navoaka io andro io izy mianadahy voatazona teny amin’ny zandary, satria vita ny fanadiadiana hoy ny fanambarana, na dia mbola misy ary ny vesatra miandry azy ireo… ny mpanao gazety izay tsapa fa tsy misy intsony ny firaisan-kina rah any eto madagasikara. Izy ireo nefa no lazaina foana fa fahefana fahefatra eo amin’ny fiainam-pirenena. Ny sendikan’ny mpanao gazety etsy ankilany nanamafy ny fitakiany amin’ny fialan’nyt minisitry ny serasera amin’ny toerany; ny tompon’orinasa fanaovan-gazety etsy andaniny manda mafy io fametraham-pialana io. Miparitaka toy ireny nipoahan’ny vanja ireny io tontolo io. Vanja izay nipoaka indray ny teo anoloan’ny tranombarotra karana etsy tsaralalana.
Nipoitra indray manko io asa fampihorohoroana io, ankoatry ny horohoro mahita ireto manambasy mivezivezy eraky ny Tanana, na io eto andrenivohitra na tany amin’ny faritra toy ny tany Antsirabe sy Mahajanga. Basy izay arangaranga entina handravana ireo mpitaky ny zony. Zo izay tsy azon’ireo mpampianatra madinika ka mba itarainany amin’ny ministera. Ny ministera izay manao rahom-bava ny handroaka sy hanapaka karama rehefa tsy nahita vahaolona.
Ankoatra ireo dia samy niara niaina tamin’ny Frantsa reny malala ny fifidianananataony ny rehatra. Na dia tsy ampy fahalalana ny amin’izay hery ankavia sy ankavanana aza ny Malagasy, izay zatra ny fanaovana politika eny rehetra eny fa tsy dia misy fironana loatra dia mba nentanim-po ihany. Lany i François Hollande, dia maninona? Misy fiantraikany amitsika ve izany hoy ny rehetra. Miezaka mihaino vaovao ny rehetra mba hahalala. Etsy andaniny nefa, ireo mpanao gazety tsy dia maika amin’izany fa ny fanomanana hetsika fankalazana tsingeritaona no tena masaka. Tsingerintaona hankalazaina ny 13 May izao. Daty iray tsy adinon’ny Malagasy koa io satria daty lazaina fa daty nitrangan-doza koa. Dia miandry izay ho avoakan’ny herinandro ny rehetra. Dia samy mamisavisa fa ity volana ity no volan’ny loza rehatra.